ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များ | USAHello ထံမှယောဘနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်သမားလုပ်သားအင်အား၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများအဆောက်အဦးအောင်မြေနှင့်အသုံးပြုမှုစက်တွေကိုပွငျဆငျ, လမ်းများ, နှင့်အခြားအဆောက်အဦများ. ပြုပြင်ရေးလုပ်သားများအဆောက်အဦးများနှင့်စက်ကို fix ထိန်းသိမ်းနည်း. သင်တို့အဘို့အညာဘက်နေသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
ရေပိုက်သမား - ရေပိုက်သမားရေပေးဝေရေးလိုင်းများတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြဿနာများရှိနေလျှင်သူတို့ကို fix. သူတို့ကအစရေလိုင်းများချိတ်ဆက်ထားကြသည်ကရိယာ fix, ပန်းကန်ဆေးစက်များကဲ့သို့. သင်တစ်ဦးပိုက်လိုင်စင်ရရှိရန်စမ်းသပ်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်လိုင်စင်ရဖို့ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်.
မော်တော်ကားစက်ပြင် - mechanics ရဲ့ကားများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် fix. သူတို့ကကားထဲတွင်အလုံအလောက်ရေနံနှင့်အခြားအရည်များရှိကွောငျးသေချာအောင်. တချို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အမော်တော်ကားနည်းပညာရှင်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်. အတန်းကိုရှာပါ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပညာရှင်များများအတွက်.
လက်သမားအလုပ်သမား - သစ်သားထဲကဖန်ဆင်းအဆောက်အဦးများနှင့်အရာဝတ္ထုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းပေးရန်အကူအညီတောင်း. သူတို့ကပစ္စည်းများသယ်ဆောင်, လေ့ကျင့်ခန်းတွင်း, နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦပြုမည်. စင်ကြယ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အလုပ်ဒေသများ. အဘယ်သူမျှမပုံမှန်ပညာရေးကဒီအလုပ်လိုအပ်. လက်သမားအလုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
Mason ဆို - Mason ကျောက်ခဲနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်. သူတို့ကရိုးကိုတညျဆောကျ, တန်တိုင်း, နှင့်ဖို့အတွက် walkway. ပန်းရန်လိမ္မာအလုပ်ဖြစ်ပါသည်, သင်မူကားအလုပ်ကိုမှာလေ့ကျင့်ရပေမည်.
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ - အဆောက်အဦးကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်ဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်များကိုပွငျဆငျ. အသုံးပြုရလိမ့်မည်ဟုတင်ချပစ္စည်းများ. တခါတလေ, သငျသညျလူသစ်တွေဆောက်လုပ်ဖို့အဆောက်အဦးချယူစေခြင်းငှါ. ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ.
ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုမန်နေဂျာ - မန်နေဂျာစီမံကိန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ. သူတို့ကကန်ထရိုက်အပေါ်အလုပ်မလုပ်, ဘတ်ဂျက်, နှင့်သတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန် clients များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်. တချို့ကမန်နေဂျာဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့သောလယ်ပြင်၌ဘွဲ့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဆောက်လုပ်ရေးသိပ္ပံသို့မဟုတ်အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာ.
crane အော်ပရေတာ - ကြီးမားသောစက်၏အော်ပရေတာအဆောက်အဦးများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြိုဖျက်ရိန်းကိုပဌနာ. တစ်ဦးကရိန်းအော်ပရေတာဖြစ်လာစေရန်, သငျသညျချီစက်လုပ်ငန်းရှင်များ၏လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးများအတွက်အတန်းယူနှင့်အမျိုးသားကော်မရှင်အနေဖြင့်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရန်လိုအပ်.
ဓာတ်လှေကားပညာရှင်များ - ဓာတ်လှေကား fix ထိန်းသိမ်းနည်း, စက်လှေကား, နှင့်အခြားစက်များ. သငျသညျအကွောငျးကိုငါးနှစ်တစ်ဦးအလုပ်သင်လေ့လာပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
လျှပ်စစ် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လျှပ်စစ်စနစ်များကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်, အိမ်တွေ, နှင့်စက်ရုံများ. ဤသည်အလွန်ခက်ခဲများနှင့်ပင်အန္တရာယ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်လိုင်စင်လိုအပ်သည်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျလျှပ်စစ်သိပ္ပံအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်. သင်တို့သည်လည်းလေးနှစ်တွင်အလုပ်သင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်. ဘယ်လိုသင်ယူ တစ်ခုလျှပ်စစ်ဖြစ်လာ.
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များအရေအတွက်ကြီးထွားလာနေသည်. သို့သော်မလုံလောကျကလူလေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြ. သင်တစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်နိုင်လျှင်, သငျသညျအစဉ်အမြဲအလုပ်ရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်. USA တွင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်အကြောင်းလေးပုံတစ်ပုံရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေဖြင့်ကျင်းပကြသည်. ဤသည်တစ်ဦးထက်ပိုဘာသာစကားစကားပြောအရေးပါတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်.
တချို့ကပြုပြင်လုပ်သားများပြုပြင်ရေးလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေသွားသဖြင့်လူတွေကိုကူညီ. သငျသညျလူတွေကိုကူညီကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ဤအအလုပ်အကိုင်များကိုသင်ကိုက်ညီမယ်လို့. အခွားသောပြုပြင်လုပ်သားများလျင်မြန်စွာတုနျ့ပွနျနှငျ့အလုပျဖို့ရှိသည် 24 နာရီအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပျက်ရသောနေ့ရက်အချိန်. သင်တို့သည်လည်းခဲယဉ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်နှင့်အအေးသို့မဟုတ်ပူသောအရပ်တို့ကိုမအတွက်ပြင်ပမှာအလုပ်လုပ်.
များစွာသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်, သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်ပေါ်တွင်သင်လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျချက်ချင်းအလုပ်ရှာနေစတင်နိုင်ပါသည်.
သည်အခြားအလုပ်အကိုင်များများအတွက်, သင်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်မှာသင်တန်းပေးခြင်းသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရနိုင်. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ. သင်တို့သည်လည်းအလုပ်သင်အဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးရှာတှေ့နိုငျ. CareerOneStop နှင့်အတူအလုပ်သင် Find.
သငျသညျနည်းပညာအရည်အချင်းများသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်ကနေဒီဂရီရှိပါက, Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.
အွန်လိုင်းရှာရန်: IHireConstruction စိုက်ပျိုးရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်, ဆောက်လုပ်ရေး, နှင့်ပြုပြင်အလုပ်အကိုင်များ. သင်တို့သည်လည်းကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအလုပ်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် indeed.com နှင့် monster.com.
သင့်ရဲ့ GED အဘို့ပြင်ဆင်ပါ® USAHello နှင့်အတူ